कोरोना खोपलाइ लिएर फेरि एकपटक WHO बाट आयो दु:खद खबर ! – Life Nepali
कोरोना खोपलाइ लिएर फेरि एकपटक WHO बाट आयो दु:खद खबर !
काठमाडौँ। विश्वभर कोरोना भाइरस विकास तथा निर्माण गर्ने काम तिव्ररुपमा चलिरहेको छ। शक्ति राष्ट्रबीच यतिबेला प्रतिस्पर्धा नै चल्न थालेको छ। कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप निर्माण गर्ने रुस पहिलो देश बनेको आफूले दाबी गरेको छ। यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले यस खोपकाबारेमा कडा चेतावनी जारी गर्दै डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार नरहेको बताएको छ। *** पूरा भिडियो हेर्न यहीँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
डब्लुएचओ भन्छ, ’विश्वभर निर्माण तथा विकास भइरहेका खोपहरुको क्लिनिकल परीक्षण गर्दा डब्लुएचओको मापदण्डको दायराभित्र नरहेर गरिएका त्यस्ता खोपहरु ५० प्रतिशत पनि प्रभावकारी हुँदैन ।’ त्यसैगरी, सन् २०२१ सम्ममा कोरोनाविरुद्धको प्रभावकारी खोप आउने आशा नरहेको डब्लुएचओले बताएको छ। डब्लुएचओकी प्रवक्ता मार्गरेट ह्यारिसका अनुसार विश्वका धेरैजसो देशहरू अहिले कोरोना खोपको क्लिनिकल परीक्षणसम्म पुगिसके तर,
यी खोपहरू मध्ये कुनैलाई पनि प्रभावकारी भन्न मिल्दैन। ह्यारिस भन्छिन्, ’ सन् २०२१ को मध्यसम्म कुनै पनि खोपको आशा छैन। अहिले विश्वमा विकास भइरहेका खोपहरुले तेस्रो चरण पार गर्न धेरै समय लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी खोप कत्तिको प्रभावकारी र यसको साइड इफेक्टलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गरिरहेका छौँ। ’ अहिले विश्वभरका प्रयोगशालाहरूमा ८८ वटा खोपहरु प्रिक्लिनिकल परीक्षणको चरणमा रहेका छन्।
Previous पत्याउनु हुन्नहोला ! आज यस्तो मुल्यमा हुँदैछ सुनको कारोबार —
Next मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने ।